Halyeey Manchester United ah oo uga digay kooxda inay iibiyaan Paul Pogba – Gool FM
Dajiye July 30, 2021
(Manchester ) 30 Luulyo 2021. Qandaraaska Paul Pogba ee kooxda Man United ayaa wuxuu dhacayaa xagaaga 2022, kooxdana waxay dooneysaa inay qandaraaska u cusbooneysiiso si ay u sii heysato adeegyadiisa, isla markaana beeca xurta ah uga tagin sanadka dambe marka qandaraaskiisa dhaco.
Halyeeyga Manchester United ee Clayton Blackmore ayaa ku dhiirogaliyay maamulka kooxda inaysan iska fasaxin laacibkooda khadka dhexe ee Paul Pogba, kaasoo magaciisa lala xiriirinayay u dhaqaaqista naadiga Paris Saint-Germain maalmihii la soo dhaafay.
Haddaba halyeeyga Manchester United ee Clayton Blackmore, ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalka Pogba, wuxuuna yiri:
“Haddii aan ahaan lahaa tababaraha waxaan eegi lahaa inaan isku dayo inaan sii haysto, maxaa yeelay waa ciyaaryahan heer caalami ah.”
“Ma ahan ciyaaryahanka ugu fiican ee qof walba, laakiin aniga ahaan wuxuu wax ka sameeyaa marka ay garoonka ku jiraan.”
“Uma maleynayo in sida ay isaga saxaafada ula dhaqmeyso ay caawinayso, waxay faafinayaan wararka sheegaya in Paris Saint-Germain ay dooneyso isaga, mana u maleynayo inay taasi run tahay.”
“Haddii aan ahaan lahaa Solskjaer, waxaan jeclaan lahaa inaan sii haysto inta ugu macquulsan, sababtoo ah ma jiraan ciyaartooy badan oo ka mid ah khadka dhexe oo isaga ka fiican adduunka.”